Rakitra marika: hidy marika
Dom » Entina notsongaina niaraka tamin'ny "lokony manan-tsaina"
Aqara dia namoaka karatra NFC teo am-baravarana
31 Jolay 2020
Aqar, hidy maranitra, n100, n200, p100
Tena ilaina tokoa ny fiarovana amin'ny Smart Home. Indrindra raha ny fitaovana marani-tsaina no vavahady ho an'ny filaminantsika. Ary mety hitranga izany raha toa ka mametraka lakile manan-tsaina isika. Aqara dia naneho vokatra vaovao mihoatra noho ny ...
Azo alaina ny lakilen'ny mpanala an-tsaina Yeelock
hidy maranitra, yeelock
Tsy mila olona mihomehy eny amin'ny drawers ianao, fa te-hanokatra azy ireo moramora ve ianao? Ny vahaolana dia ny lakilen'ny Smart Drawer Yeelock izay niseho tamin'ny AliExpress. Ny lapa dia ahitana singa roa izay ...
Aqara dia miasa amin'ny lapa EU
Aqar, hidy maranitra
Andro vitsy lasa izay dia nisy fanontaniana iray mahaliana tonga tao amin'ny Facebook. Tsiahivina fa manontany ireo mpampiasa any Eropa i Aqara hoe inona ny hidin-dry zareo hampiasaina. Hamolavola trano eoropeana vaovao avokoa ny rehetra! Olana amin'ny famantaran'i Aqara ...
Xiaomi Smart Lock E dia hidin-tsaina vaovao vaovao avy any Xiaomi
Aqar, hidy maranitra, xiaomi, xiaomi trano
Vao avy nanoratra taminao aho momba ny varavarana varavarankely Aqara vaovao, ary i Xiaomi dia efa mamoaka entana hafa. Tsy mba mahagaga ahy izany. Xiaomi Smart Lock E dia vokatra vaovao, mampisafotofoto toy ny Aqara N100. Mitohy Xiaomi ...
August dia namoaka fanidiana marani-tsaina vaovao - kely kokoa noho ny teo alohany izy io
Ny lakilen'ny marika volana aogositra dia iray amin'ireo fikandrana notadiavina tamin'ny CES 2020 tamin'ity taona ity.Misaotra anao rehetra satria tamin'ny fandefasana azy io dia misy fampiasa bebe kokoa izy ireo nahafahan'izy ireo nihena. Ny aogositra Wi-Fi Smart Lock dia eo amin'ny ...
Navoaka ny Netatmo ny hidim-bolan'ny NFC miaraka amin'ny HomeKit
homekit, hidy maranitra, netatmo
Netatmo dia marika fanta-daza eo amin'ny olona tia HomeKit. Ny fakantsin'izy ireo, ny fanairana na mpanara-maso setroka dia malaza be dia be. Ankehitriny dia mandray ny dingana manaraka i Netatmo ary manampy ny hidim-baravarana manan-tsaina ho an'ny tsipika vokatra marani-tsaina. Castle ...
Azo alaina izao ny lakilen'ny mahay vaovao Aqara!
Aqar, aqara N100, hidy maranitra, xiaomi
Volana vitsivitsy lasa izay, nanao ny fihaonambe lehibe i Aqara izay nanolorany vokatra vaovao maro. Anisan'ireny ny fanalahidy manan-tsaina roa, izay iray vao navoaka tamin'ny GearBest! Hihaona amin'ny Aqar N100. Aqara Castle, toy ny maro hafa ...